Otu esi eme mgbanwe site na MS Office na LibreOffice dị mfe | Site na Linux
Otu esi eme mgbanwe site na MS Office na LibreOffice dị mfe
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Na-atụ aro
Ọfịs ụlọ ọrụ bụ ihe dị mkpa na usoro Mbugharị ọ bụla na sistemụ arụmọrụ ọzọ, ọ bụghị naanị n'ebe ọrụ kamakwa maka ndị ọrụ ụlọ. Nke a abụghị ihe omimi, ajụjụ a na-anụkarị na mmadụ na-anụ mgbe ọ na-atụ aro onye ọzọ na ọ ga-ekwe omume ịgbanye GNU / Linux bụ: "M ga-enwe ike imeghe faịlụ MS Office dị otú ahụ?" Kpamkpam maka nke a, ntakịrị mkpa anyị na-enye ọfịs ụlọ ọrụ na GNU / Linux na-akpọ m ntị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ekwenyere m na maka GNU / Linux iji mee ihe ebe niile na iji merie ahịa kọmputa desktọọpụ otu ugboro, ị chọghị onye editọ vidiyo dị elu ma ọ bụ nchịkọta akụkọ ihe oyiyi nke dị ugbu a. nke Photoshop, ọbụnadị igwe egwu egwu dị ka Steam. Naanị ihe ọ ga-eme bụ ime ka ọ dị mfe.
Inweta ụlọ ọrụ GNU / Linux arụnyere na kọmpụta ndị ọzọ bụ n'ezie ụzọ dị mma, mana enyemaka ga-abụ ma ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ anaghị enye gị ohere ịmepe faịlụ ndị mmadụ na-arụ ọrụ? N'ihi nke a, otu n'ime ihe m na-akwado ndị chọrọ ịnwale GNU / Linux bụ ịmalite ịnwale ngwa ngwanrọ n'efu na-arụkwa na Windows. N'ụzọ ahụ, mgbanwe ahụ dị nwayọ. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, m na-etinye LibreOffice, VLC, GIMP na Firefox, n'etiti ndị ọzọ, ka ha wee jiri ya na interface ya na ọrụ niile.
Okwu ikpe nke LibreOffice bu, dika m kwurula, dikwa nkpa ma obughi nsogbu. Ntuziaka a na-enyere ndị na-achọ ịnwale ụlọ ọrụ a ka ha nwee ike ịme mkpebi mara, na ha maara uru na ọghọm dị n'iji mmemme a.
1 Gini mere iji gabiga LibreOffice?
2 Olee nsogbu ndị m nwere ike inwe ma m chọọ ịkwaga ná mba ọzọ?
2.1 Ihe nkwado faịlụ ezughi oke
2.2 Macros anaghị arụ ọrụ
2.3 Enweghi ike idezi dọkụmentị n'otu
2.4 Enweghị functionalities ma ọ bụ njehie (chinchi)
3 Ajụjụ ọzọ
3.1 Mụta nha anya
3.2 Usoro nkwekọrịta na LibreOffice
3.3 Wụnye Fonts Microsoft
Gini mere iji gabiga LibreOffice?
Ọ bụ n'efu. N'adịghị ka MS Office, ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ nnukwu ego inwe ike iji ya. Ọ bụ ezie na nke a n'onwe ya nwere ike ịbụ ezigbo ihe kpatara onye ọrụ ọ bụla, ọ nwere mmetụta ka ukwuu na azụmaahịa obere na nke ọkara, nke na-ejikarị otu kọmịwe nke ọfịs na kọmpụta azụmahịa ọ bụla. Ọtụtụ mmadụ, ọbụlagodi ụfọdụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ Steeti n'onwe ya, na-ahọrọ iji zere nsogbu a site na iji mbipụta nke prọpị nke Officelọ Ọrụ MS, yana ihe egwu nchekwa nke a na-egosi. LibreOffice, n'aka nke ọzọ, bụ nnwere onwe na nchekwa.
Ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ. Dị ka ngwanrọ niile anaghị akwụ ụgwọ, LibreOffice na-enweta ndozi na-aga n'ihu, nke nwere mmetụta na nchekwa na nkwụsi ike nke mmemme ahụ. Na mgbakwunye, LibreOffice nwere otu n'ime obodo ndị na-arụsi ọrụ ike, nke na-arụ ọrụ mgbe niile na ntinye nke arụmọrụ ọhụrụ yana ndozi nke njehie.
Jiri usoro efu: N'adịghị ka DOC, WPD, XLS ma ọ bụ RTF, nke bụ usoro mechiri emechi nke naanị ndị okike ha maara nke ọma, LibreOffice na-eji Usoro ODF n'efu, nke ghọrọ ọkọlọtọ mba ụwa ISO 26300: 2006. Eziokwu iji usoro eji emeghe na ọkọlọtọ na-egbochi ịla n'iyi nke dọkụmentị gị ma na-enye ya ohere imeghe ya n'ọdịnihu.
Ọ bụ multi-ikpo okwu: Enwere nsụgharị nke LibreOffice maka Windows, Mac na Linux. Nke a na-eme ka mgbanwe ahụ dị mfe, ọkachasị ma ọ bụrụ na iji otu sistemụ arụmọrụ n'ụlọ na ọrụ, dịka ọmụmaatụ.
Chọghị interface rịbọn nke MS Office. Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịhapụ MS Office n'ihi na ha enwebeghị ike imeghari na eriri rịbọnụ. N'aka nke ọzọ, LibreOffice nwere interface ọdịyo "kpochapụwo", nke na-eme ka mgbanwe maka ndị ejiri usoro MS Office ochie.
Olee nsogbu ndị m nwere ike inwe ma m chọọ ịkwaga ná mba ọzọ?
Anyị ahụworị ihe kpatara agafere. Agbanyeghị, dị ka usoro mpụga ọ bụla, nsogbu nwere ike ibilite. Ka anyị lee ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị nkịtị:
Ihe nkwado faịlụ ezughi oke
LibreOffice na MS Office anaghị eji otu ụdị maka faịlụ ha na ndabara. Dịka anyị hụburu, LibreOffice na-eji ODF. Maka akụkụ ha, nsụgharị ochie nke MS Office na-eji usoro mechiri emechi (DOC, XLS, wdg) nke naanị Microsoft maara na omimi. N'ihe dị ka 2007, MS Office na-eji OpenXML site na ndabara, a makwaara dị ka OOXML (DOCX, XLSX, wdg). N'adịghị ka usoro gara aga, enwere ike ịtụle nke a dịka usoro mmeghe (dị ka ODF) ma jisie ike bụrụ ọkọlọtọ mba ụwa ISO / IEC 29500.
Ọ bụ ezie na ụdị nke LibreOffice na MS Office kachasị ọhụrụ na-eweta ndakọrịta maka ụdị ndị a niile - yana ọtụtụ ndị ọzọ - eziokwu bụ na ha ezughị oke, nke na-apụtakarị na faịlụ ndị ahụ anaghị adị otu na otu mmemme dị ka nke ọzọ. Nke a, n'ezie, dị njọ karịa nke LibreOffice, ebe ọ bụ na ejighị ya karịa MS Office. Maka nke a, ọ bụ ndị ọrụ LibreOffice ga-emegharị maka usoro ndị kachasị, ọ ga-abụ ihe a na-apụghị izere ezere, n'ezie.
Kedu ka esi edozi nsogbu a?
Ọ dị mma, ihe dị mkpa ebe a bụ ịchọpụta ma a ga-edezi faịlụ ndị a na-ekwu ma ọ bụ na ọ gaghị emechaa.
Ọ bụrụ na edezi adịghị mkpa, mgbe ahụ ihe ngwọta dị mfe. Ọ kachasị mma mbupụ akwụkwọ ahụ na PDF ma kesaa faịlụ a karịa nke mbụ. Nke a bụ eziokwu ma maka faịlụ MS Office (DOC, DOCX, XLS, XLSX, wdg) na maka LibreOffice (ODF) faịlụ, ebe ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na nkwado nke LibreOffice gụnyere maka akwụkwọ MS Office ezughi oke, naanị ụdị ọhụụ nke MS Office gụnyere ODF nkwado, na ụfọdụ mara mma ọjọọ na mmachi nkwado. Site na ịkekọrịta faịlụ ahụ na PDF, n'aka nke ọzọ, anyị ga-ahụ na ndị mepere faịlụ ahụ ga-enwe ike ịhụ ya dịka e siri rụọ ya. Ọ dị mma ịkọ na LibreOffice gụnyere ohere nke ịtụgharị dọkụmentị na PDF na-enweghị mkpa ịwụnye mgbakwunye ma ọ bụ ngwugwu ọzọ. Just ga-agarịrị Faịlụ> Mbupụ dị ka PDF. Ndị ọrụ chọrọ ime nke a nwekwara ike ịhazigharị usoro nhọrọ iji hazie mbupụ ahụ kwuru, nke bụ otu n'ime ihe kachasị elu m hụgoro n'ụdị ụlọ ọrụ a.
Ọ bụrụ na nhazi nke faịlụ a ga-ekerịta dị mkpa, mgbe ahụ enweghị ngwọta zuru oke, agbanyeghị na enwere ụfọdụ ndụmọdụ ga-etinye n'uche. Nke mbụ bụ ịchekwaa faịlụ ndị a na usoro MS Office 97/2000 / XP / 2003. N'ime ogologo ahụmịhe m n'iji LibreOffice, na tupu OpenOffice, enwere m ike ịsị n'enweghị nsogbu na DOC usoro faịlụ (ọ fọrọ nke nta) na-akwado karịa DOCX faịlụ. Enwere ike ikwu otu ihe maka XLS faịlụ na XLSX faịlụ, wdg. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ezie na ọ kachasị mma iji ụdị anaghị akwụ ụgwọ, MS Office gụnyere nkwado faịlụ ODF na-enweghị atụ. Na mmechi, ọ dị nwute, ihe kachasị mma bụ ịchekwaa faịlụ ahụ na usoro MS Office ochie. Nke a bụ, site n’echiche m, ọmarịcha nnabata ebe ọ bụ na LibreOffice gụnyere nkwado ka mma maka usoro MS Office nkeonwe, karịa usoro OOXML mepere emepe. Ma hey, nke ahụ bụ eziokwu dị mwute.
N'aka nke ọzọ, dịka LibreOffice na-echekwa faịlụ na usoro ODF na ndabara, oge ọ bụla anyị chekwara faịlụ na usoro ọzọ anyị ga-enweta akara ngosi na-eme ka anyị mata nsogbu ndakọrịta nwere ike. Ọ bụrụ na nke a na-akpasu iwe ma ịchọrọ ịchekwa oge niile na usoro MS Office 97/2000 / XP / 2003, ọ ga-ekwe omume ịgbanwe omume a site na ịga Ngwaọrụ> Nhọrọ na mgbe ahụ Ibu / Chekwa> General. N'ebe ahụ, ị ​​ga-elepụ igbe ahụ Mara m mgbe anaghị m echekwa na usoro ODF na na Na-echekwa mgbe niile họrọ MS Office 97/2000 / XP / 2003, dị ka a hụrụ na nseta ihuenyo n'okpuru.
Macros anaghị arụ ọrụ
LibreOffice gụnyere nkwado maka Macros, mana a na-echekwa ndị a site na iji asụsụ dị iche na nke MS Office jiri. LibreOffice na-eji asụsụ a na-akpọ LO-Basic, ebe MS Office na-eji nsụgharị Visual Basic ahaziri iche maka ngwa, nke a maara dị ka VBA. N’agbanyeghi na asusu abuo yiri onwe ha, ha nwegasiri ndi iche na odighi ekwekorita. Dị ka a ga - asị na nke a ezughi, LibreOffice gụnyere ezigbo nkwado maka VBA, yana MS Office anaghị agụnye nkwado ọ bụla maka LO-Basic. Nke a na-eme macros edere na MS Office adịkarịghị na-agba ọsọ nke ọma na LibreOffice, na Anglịkan. N'ikpeazụ, LO-Basic akwụkwọ ọ dara ezigbo ogbenye, ọbụlagodi na Bekee. Ndị nwere mmasị ịmụta LO-Basic, nwere ike lelee ochie a ndu maka programmers.
N'ebe nsogbu a dị, enweghị ụzọ mgbapụ, n'ezie. Naanị ihe fọdụrụ bụ ịhapụ iji macros ma ọ bụ iji aka sụgharịa macros, nke nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe maka macros kachasị mfe ma ọ bụ ezigbo odyssey n'ihe banyere macros dị mgbagwoju anya.
Enweghi ike idezi dọkụmentị n'otu
Ọ bụ ezie na a mara ọkwa ya ọtụtụ afọ gara aga na ọrụ a ka a na-emepe, na ọbụna vidio nwere ihe ngosi na-arụ ọrụ gụnyere, n'ihi ihe ụfọdụ ihe anaghị eme nke ọma. Ergo, LibreOffice enweghi ikike iji aka ya dezie akwụkwọ.
N'oge ahụ, nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ GNU / Linux bụ iji Google Docs, Zoho, ma ọ bụ ụfọdụ ọrụ igwe ojii ndị ọzọ yiri ya. N'etiti ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ ọ bara uru ịkọwapụta NaanịOffice y Etherpad, nke na-enyekwa akwụkwọ ikike ọrụ aka.
Enweghị functionalities ma ọ bụ njehie (chinchi)
LibreOffice na MS Office anaghị eweta otu ọrụ ahụ. Nke a pụtara na ụfọdụ ihe enwere ike ịme na LibreOffice enweghị ike ịme na MS Office na ntụgharị. Enwere ike, ọtụtụ ọrụ na-efu na LibreOffice karịa na MS Office, ọkachasị na LibreOffice Impress and Base, nhata nke MS Power Point na Access.
Mara oke ike ndị a tupu oge dị mkpa mgbe ị na-akwaga na LibreOffice. Iji hụ ndepụta zuru ezu nke LibreOffice na arụ ọrụ MS Office ana m atụ aro ịgụ ya The Akwụkwọ Foundation wiki. Ekwesiri ighota na ufodu n’ime okwu ndia abughi ihe di nkpa dika ha di. Eziokwu ahụ bụ na LibreOffice Base ezughi ezu dị ka MS Access adịghị mkpa karịa ịtụle na ịnweta n'onwe ya ka a na-ahụta dị ka usoro nchekwa data ochie, nke ndị ọzọ nke oge a kariri. Banyere njehie nke mmemme ahụ nwere ike ịnwe, dịka ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, a na - atụ aro ya kpesa ahụhụ ahụ ya mere na obodo nwere ike idozi ya.
Mụta nha anya
Ọ dị mkpa ịmụta aha mmemme ahụ nke na-arụ ọrụ dị ka ihe ọzọ na ngwaọrụ MS Office ọ bụla, yana mgbakwunye dịgasị iche iche ejiri ndabara na nke ọ bụla mee ihe.
Okwu (.doc, .docx) Onye edemede (.odt)
Ike Ike (.ppt, .pps, .pptx) Mmetụta (.odp)
Nweta (.mdb, .accdb) Isi (.odb)
Visio (.vsd, .vsdx) Bịaruo (.odg)
Usoro nkwekọrịta na LibreOffice
Akwụkwọ Document, ntọala maka mmepe nke LibreOffice, akwadebela a usoro nkwekọrịta gaa n'ọfịs a na-agụnye ndepụta nke usoro ị ga-eme mgbe ịmalite usoro Mbugharị na nzukọ ọ bụla. Akwadoro akwukwo a.
Wụnye Fonts Microsoft
Otu n’ime ihe kpatara na ụfọdụ akwụkwọ anaghị ele otu na Windows na GNU / Linux bụ maka na anaghị etinye ndabara ederede na Windows na GNU / Linux. Agbanyeghi na uzo ozo ndi ozo n’enye gi na GNU / Linux yitere onwe ha nke oma, ufodu n’ime ha, kariri nke teknuzu, abughi otu.
Laa azụ na 1996, Microsoft wepụtara "ngwugwu web-TrueType font package." Akara ókwú a nwere ikikere dị mma, yabụ onye ọ bụla nwere ike itinye ha. N'oge ahụ Microsoft chọrọ ka mkpụrụedemede ha bụrụ ụdị ọkọlọtọ ọkọlọtọ gburugburu ụwa, yabụ ha hapụrụ ha ndị chọrọ iji ha. Mpempe akwụkwọ a gụnyere Andale Mono, Arial, Arial Negro, Comic Sans MS, Courier New, Georgia, Impacto, Times New Roman, Trebuchet, Verdana, na Webdings fonts. Cheta na Times New Roman bụ akara ngosi ndabara maka akwụkwọ Office ruo 2007.
Ntinye na Ubuntu na nkwekọrịta:
Enwere ike itinye ụdị mkpụrụ edemede Microsoft nke doro anya. Isi mmalite ndị a bụ: Constantia, Corbel, Calibri, Cambria, Candara na Consolas. Calibri ghọrọ font ndabara na Microsoft Okwu site na nke 2007 gaa n'ihu. O di nwute, Microsoft eweputaghi akwukwo ndia nye ndi mmadu, dika o si eme ya. Agbanyeghị, ọ gụnyere mkpụrụ edemede ndị a dịka akụkụ nke PowerPoint 2007 Viewer, nke dị maka nbudata n'efu. N'iji ọnọdụ a mee ihe, enwere ike iji edemede nke ga - ebudata Onye na - ele PowerPoint Microsoft, wepụ mkpụrụ akwụkwọ Clear Type, ma wụnye ya na sistemu GNU / Linux gị.
Echefukwala inye ikikere na faịlụ ahụ wee gbaa ya:
Iji jiri mkpụrụ edemede ndabara a na LibreOffice, gaa na Ngwaọrụ> Ntọala na mgbe ahụ LibreOffice Onye edemede> Akwụkwọ edemede, dị ka a hụrụ na nseta ihuenyo n'okpuru.
N'iburu n'uche ahụmịhe gị dịka onye ọrụ GNU / Linux, ajụjụ ndị ọzọ ị ga-akwado ndị ọrụ na-eche maka ịkwaga na LibreOffice?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Otu esi eme mgbanwe site na MS Office na LibreOffice dị mfe
Ọ dị ihe dịka afọ ise kemgbe m kwagara LibreOffice na ebutewo m ọtụtụ mgbanwe ahụ. Trickzọ m bụ ka m ghara inye onye ọ bụla nsogbu.
Mgbe ndị na-arụ ọrụ na windo windo zitere m akwụkwọ, ana m ezigara ha akụkụ m azụ na usoro abụọ, doc na odf. M na-eme ka ha mata, dịka ọmụmaatụ, etu ha ga-esi rụọ ọrụ mgbe ha gachara. A mụrụ mkparịta ụka ahụ ma agwa m ha gbasara ụlọ m, m na-agwa ha ka ha tinye ya na igwe ha na windo ma ọ bụ mac, ịnwale ya, ịnwe mmemme abụọ ahụ na iji tụnyere ọsọ nke ọrụ na otu na nke ọzọ.
Enweela m ikpe nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa hapụrụ ụlọ ahụ na mgbe ọnwa ole na ole gachara OS n'ihi na ha chọpụtara na Libre na-arụ ọrụ nke ọma, ngwa ngwa, na-adị jụụ.
Oh, na mgbe m pester ị na nkà ihe ọmụma dribble nke mere ọtụtụ n'ime anyị na-eji free software. Ha choro oru oma nke oma ma nwekwaa ego! Na ahụmịhe m, izipu na izipu ozi megide windo na ihu ọma nke GNU linux site na n'akụkụ ndị ọzọ na-abụghị ngwaahịa na-arụpụta ọrụ anaghị agbakwunye.
Site na ahụmịhe m, ọ ka mma na LibreOffice iji chekwaa faịlụ ahụ na usoro ha na-emeghe ma chekwaa ha na usoro MS Office mgbe ịchọrọ izipu ha na onye na-eji ụlọ ọrụ a.
Ọ bụrụ na echekwara ya site na mbido site na usoro mechiri emechi, akwụkwọ ahụ nwere ike ịdị iche ma ọ bụ nye nsogbu ụdị / usoro oge ọ bụla anyị mepere ya na, agbanyeghị na-agbazi mmejọ, ha na-apụta ọzọ mgbe emepere akwụkwọ ahụ na LibreOffice.
Ana m ekwuputa echiche gị nke ọma.
Ezigbo ederede ..
Enwere m nsogbu na edemede ederede:
bash :./vistafonts-installer: / bin / sh ^ M: onye ntụgharị okwu ojoo: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị adị
mana faịlị ahụ dị na folda ~ /
Kwesiri ịtọ ntọala ikike na chmod + x vistafonts-installer.
Ọ bụrụ na m setịpụrụ ikikere ogbugbu na faịlụ ahụ .. agbanyeghị, aga m eme ya n'aka dịka | emir |
Ana m ekele gị!
Ekwe 85321 dijo
Emegharịrị ya na windo, ị ga-ewepụ ihe odide zoro ezo nke pụtara nkwụsịtụ akara nke windo na-etinye. Enwere obere mmemme na-eme dos2unix ahụ. Install rụnyere ha "apt-get install dos2unix" wee jiri nke ahụ wepu that M nke pụtara.
Apụghị m ịhụ faịlụ na m kwesịrị gbanwee iji na-agba ọsọ edemede. Gịnị bụ aha na ihe nchekwa m na-ahụ ya kpọmkwem?
a na-akpọ ezigbo nhọrọ wps office, ọ bụ mmepụta oyiri nke ụlọ ọrụ Microsoft, ọtụtụ ndị ọrụ na-eji interface nke ụlọ ọrụ Microsoft maka otu ihe ahụ ọ ka mma wps
WPS dị ka Freeware ọzọ dị mma. Dịka Libre ọzọ, LibreOffice ma ọ bụ OpenOffice kachasị mma.
Ọmarịcha ederede magburu onwe ya!
ezigbo ederede juputara na aro di nma
tube nsogbu na edemede dị ka Jose, Amaghị m ma ọ bụrụ na OS m enweghị njikọ mana edoziri ya
Agụrụ m ya wee nweta usoro iji budata faịlụ font ahụ ma jiri aka gị wụnye ha aka.
Zaghachi | emir |
N'ebe a na - arụkọ ọrụ ọnụ, ya na Calc na - arụ ọrụ ọfụma, ruo ugbu a ọ daghị mba m.
Ọ bụ eziokwu. Echefuru m ikwu na Calc ị nwere ike… Aghọtaghị m ihe ha na-eche iji mee ka nke a bụrụ na Onye edemede.
Naanị n'izu a ekpebiri m ịkwụsị iji ụlọ ọrụ Microsoft, nke bụ n'ezie sọftụwia dị ukwuu, iji gbanwee gaa na nsụgharị ndị nweere onwe ha, nke m na-eji kemgbe ọtụtụ afọ n'ụlọ na Linux na Windows. Nke ahụ bụ, Thunderbird kama Outlook na LibreOffice kama Office.
Ọtụtụ oge, edebewo m Office maka ndakọrịta na akwụkwọ nke ndị ọrụ ibe na ndị ahịa m, mana achọpụtara m na mgbanwe nke akwụkwọ na ha pere mpe, yana ojiji kasịnụ bụ nke m, yabụ ahụghị m ihe kpatara eji sọftụwia nwere nke m dị ka n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ o nwere mmalite adịghị mma.
Maka ụzọ ị ga - esi mee mkpọsa ... nwayọ, ọ bụrụ na ị jụọ m maka akwụkwọ m ga - enye gị nhọrọ nke ODF na ụlọ ọrụ, PDF ma ọ bụ usoro Microsoft nke LibreOffice gbanwere. Ọ bụghị ime ihe dị mma, mana m na-eche mgbe niile ihe kpatara ọtụtụ ndị SME ji eji sọftụwia eme ihe maka ọtụtụ akụkụ dị mfe, na a ga-enyerịrị ihe.
Ugbokodo 369 dijo
Eziokwu bụ, Excel dị elu karịa Calc, agbalịrị m n'otu oge ịrụ ọrụ na nke ikpeazụ mana mgbe m na-arụ ọrụ karịa ihe ndekọ 100.000 ọ kwụgidere, na Excel niile jupụtara na macros dị mfe mmemme, ị ga-ahụ ya ụlọ na mgbakwunye na ọdịdị nke, Calc kwesịrị imeziwanye ọtụtụ ihe iji mee ka ọ bụrụ nke ọzọ siri ike na ọfịs, bụ echiche ọrụ m dị umeala n'obi ..
Zaghachi angelrell 369
Echere m otu ihe ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, ekwesịrị ikwu na n'agbanyeghị na ọ nwere ike ọ gaghị ogo ọkọlọtọ nke MS Excel, eziokwu bụ na 90% nke ndị ọrụ anaghị eji ihe karịrị obere akụkụ nke ihe mmemme ahụ na-enye ... na LibreOffice nwere ike mee ihe ndị ahụ '' basic '' dịtụ mma.
A na - edozi nsogbu a site na ịhazi ngalaba nchekwa LibreOffice, ị ga - abawanye ojiji nke oke eburu.
Mkpebi mgbe "ahụhụ" mmejuputa ApacheOpenoffice n'ebe ọrụ m.
- Imepe ederede na-ewe ugboro 5-6 karịa ị bido ya na MSOffice. N'ihi nke a:
Ọ bụrụ n’ịga eji ehihie ede otu ederede, nke a agaghị adị gị mkpa, mana mụ na ndị ọrụ ibe m na-etinye 40% nke oge mmeghe na mmechi faịlụ iji lelee steeti nke faịlụ ọ bụla tupu anyị amalite ide ahụ nke ederede na-emelite faịlụ ahụ.
Anyị na-enwetakarị ndị mpụga ịkọwa mmalite nke faịlụ ahụ site na mbido, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ gụnyere inye ha akụkọ ọjọọ, yabụ kama ịnwe ike ịgwa ha akụkọ na-agbanwe agbanwe na akụkọ na-agbanwe agbanwe, anyị na-anọ ugbu a oge dị ukwuu n'etiti akụkọ ọjọọ na akụkọ ọjọọ…
Anyị nwere ndị isi na-akwụsị "oge ha dị oke ọnụ" ma were iwe ịhapụ ọfịs ha n'ọfịs nwere echiche dị ịtụnanya na naanị ihe ha rịọrọ anyị ka ọ laghachi bụ na anyị ga-enye ha ozi ha chọrọ ozugbo. ma ọ bụ nkeji na ọkara, ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụ atọ… na gị na-eku ume na azụ ya n'olu, ọ bụ nnọọ wetara.
Ka a mara na anaghị m emetụ aka na nkuzi, na ọ bụrụ na onye isi ahụ kwuru "onye ọ bụla ugbu a na OpenOffice" mgbe ahụ anyị agbagoro na nke ahụ bụ ya, ana m ekwu maka oge nzaghachi, ihe a na-agaghị edozi. ..
Na ahụmịhe m, oge a mgbe ị na-emeghe ma mechie faịlụ na LibreOffice na-ahụkarị na faịlụ dị n'ụdị MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, wdg). N'aka nke ọzọ, mgbe ha mepere faịlụ LibreOffice, ha na-aga Ọsọ ọsọ.
Yabụ nkwanye m bụ iji faịlụ LibreOffice nke obodo, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Daalụ maka ịkekọrịta, eziokwu ahụ bụ na echere m na ọ bụ ezigbo isiokwu iji gbasaa ihe ọmụma maka onye dị ka m, onye ọrụ ụlọ, ana m eji GNU / Linux ma enwere m obi ụtọ na ọtụtụ ikike, ngwaọrụ na ngwa ọ nwere na andlọ Ọrụ Libre a n'ihi na m bụ kediegwu ebe m na-achọghị ihe ọ bụla ọzọ ọ zuru ezu!. Dịka ọmụmaatụ, akwụkwaghị m ịtinye mgbakwunye ndị ọzọ iji bipụta faịlụ pdf, nke dị m mkpa.
M na-agba onye ọ bụla chọrọ ịnweta ọfịs ọrụ a ume, ọ dịghị ihe funahụrụ site n'ịgbalị, n'ụzọ megidere, enwere ọtụtụ ihe.
Otu isi ihe ha chefuru ikwu banyere ya bụ ọdịdị… MSoffice nwere naanị agba 3 (ojii, acha anụnụ anụnụ na ọla ọcha). Mgbe na LibreOffice enwere ohere enweghi ike ịhọrọ agba na nzụlite ... Ma nke a dị mma n'anya ...
Gbalịa ya na:
Ngwaọrụ - Nhọrọ - Nhazi - Họrọ isiokwu ...
Otu n'ime ihe ndị mara mma nke Open Source na-enwe ike iji ngwaahịa dị elu dị ka ụlọ ọrụ na-akwụghị ụgwọ na n'efu
Zaghachi Alejandro Tor Mar
Ntisa ma obu otutu ndi ozo - nke ufodu bara uru- mechie ihe ngwanrọ a gha ebuputa, ihe di iche na anya, njikwa, njikwa, bọtịnụ, ụzọ mkpirisi na ndị ọzọ, mana nke kachasị mkpa na-eme ihe dị otu.
Ọtụtụ narị nkesa Linux na ngalaba nke ọ bụla, kama ịmepụta nnukwu usoro, na-eleghara ahịrịokwu ahụ anya "ịdị n'otu bụ ike".
Ọ bụrụ naanị na ha jikọtara echiche na mgbalị, ma ọ dịghị ihe ọzọ na ndakọrịta, ọganihu ahụ ga-adị ukwuu. LibreOffice, OpenOffice, KOffice, GnomeOffice na ndị ọzọ, onye ọ bụla na-asọ mpi na "na-eme otu ihe ahụ" nke ọ bụla n'ụzọ nke ha, dịkwa n'ọtụtụ ngwa. Withfọdụ nwere nkwado karịa $ karịa ndị ọzọ, ọ naghị enyere aka.
Dị ka atụmatụ iji nyere aka na mbugharị, ọ bụrụ na ọ dị na Linux ị ga-etinyere ngwugwu PPTVIEW (ịchọrọ mmanya) ka ị nwee ike ịhụ ppt na pps n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ebe LO na OO mepụtara elele dị fechaa. Gbalị ịhụ ọtụtụ pp * na-egbu oge ọ bụla iji kwado ihe niile dị na Libre / Open Impress kama ịbụ onye na-ekiri obere na ìhè, nke dị na MSO dị adị ma dị ngwa ngwa ibu. Na windo m na-eji LO naanị, mana m na-etinye onye na-ekiri ike, maka otu ihe ahụ
Enwere m ahụhụ na njehie log na LO na-enye, na-eche ka eziga ndị mmepe ahụ
Malite na LibreOffice 4.4, agbakwunye ụzọ abụọ na mkpụrụ edemede Calibri na Cambria nke Microsoft. Iji wụnye ha naanị:
apt-nweta ịwụnye fon-crosextra-carlito fonts-crosextra-caladea
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ nkwado maka asụsụ Western Europe, Turkish, akara mgbakọ na mwepụ na nkwado ele mmadụ anya n’ihu maka asụsụ ndị dị n’Ebe Ọwụwa Anyanwụ Europe, ịnwere ike ịwụnye ngwungwu a:
apt-nweta wụnye ttf-bitstream-vera
Zaghachi Daniel A. Rodriguez
N'ihe banyere iji mmekorita eme ihe enwere ihe anakpo Sironta, nke dika m guworo bu ihe mepere emeghe, obu ezie na odi m ka onwere nke efu na nke ugwo, mana o na enye ezi mmekorita ya na ndi Open Source, dika OpenOffice na LibreOffice. M na-ahapụ njikọ ahụ ma ọ bụrụ na mmadụ nwere mmasị, ọ bụ maka ikpo okwu ọ bụla (Windows, Mac OS X na Linux.) Nke a bụ url:
Onwe ya, anaghị m anwale ya, mana hey, onye nwere oge nwere ike ime ya wee hapụ ahụmịhe ha gosipụtara ma hụ ma ọ na-enye nsonaazụ ọma.
Enwere m ngwa na Access 2003 ma achọrọ m imeghe ya na WPS Office. Otu esi eme ya? Amaghị m
Ezi ehihie, kedu ka m ga-esi gbanwee faịlụ calc na onye edemede na linoux?
Zaghachi ka maryury
Brackets 1.1 kedu ihe ohuru ma etinye oge?